Apple goro ụlọ ọrụ Sony abụọ iji bulie ọdịnaya vidiyo ya | Esi m mac
Ebe ọ bụ na Apple webatara usoro egwu ya na-asọ asọ ihe karịrị afọ abụọ gara aga, ụmụ okorobịa si Cupertino kwupụtara na Apple Music agaghị abụ naanị ebe a na-ege egwu, mana ọ ga-aghọkwa ebe ndị ọrụ nwekwara ike ịnụ ụtọ vidiyo na-enweghị atụ. Kemgbe iwebata ya, Apple apụla nwayọ karịa etu esi atụ anya ya wee rue ụbọchị ole na ole gara aga, ọdịnaya izizi ewepụtara nke Apple ahụbeghị. Planwa nke Ngwa, bụ ihe omume izizi edere ka a ga-agbasa na Apple Music naanị maka ndị niile debanyere aha, mana ọ bụghị naanị ya.
Inbọchị ole na ole, James Corden ga-ebido Carpool Karaoke, nke James Corden na-agaghị abụ onye ọzọ na-agba ajụjụ ọnụ, ebe ọ bụ na ọ gaghị apụta ma e wezụga n'oge ndị ọzọ. Ma nke ahụ bụ ya. N'oge a enweghị ọdịnaya ọzọ Apple nyere site n'ụdị ọdịnaya na-enweghị atụ. Hụ njedebe na nsogbu ndị Apple na-eche ihu, ụmụ okorobịa si Cupertino kpebiri fna-ewe ndị isi ụlọ ọrụ Sony abụọ ịmalite ịmalite iwepụta ọdịnaya izizi n'ụzọ ọsọ ọsọ ma rụọ ọrụ nke ọma.
Jamie Erlicht na Zack Van Amburg bụ ndị isi Sony abụọ ga-akọrọ onye isi osote onye isi oche ntanetị, sọftụwia na Ọrụ Eddy Cue. N’etiti ụfọdụ ihe ịga nke ọma nke ndị isi abụọ ahụ rụpụtara n’ụwa nke igwe onyonyo anyị hụrụ Na-agbasa ihe ọjọọ, nke ziri ezi na okpueze.
Ihe ịrịba ama abụọ a bụ naanị akụkụ nke ndị isi ụlọ ọrụ ndị debanyere aha na ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji welie ikpo okwu vidiyo ha. Ugbu a, anyị ga-anọdụ ala ma chere iji hụ ma ọ bụrụ na ntinye aka ndị a amalite ịmị mkpụrụ na Apple Music n'ezie na-aghọ ikpo okwu nke Apple nwere ike gosipụta ọdịnaya dị mma, dịka ekwuputara afọ abụọ gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple goro ụlọ ọrụ Sony abụọ iji bulie ọdịnaya vidiyo ya
Kedu ka eserese ahụ si meziwanye na macOS High Sierra ekele Metal 2